December 26, 2019 – Kichuu
Lammaa Magarsaa: Pireezidantiin duraanii Oromiyaa attamiin siyaasa Itoophiyaa keessatti gurra horatan? Barruu ‘The Economist’ jedhamuun bara 2018 Itoophiyaa keessatti ‘nama siyaasaa daran beekamaa ta’e’ ykn ‘the most popular politician’ kan jedhaman Obbo Lammaa Magarsaa ammas irra deebiin siyaasa [Read More]
Profeser #Mohammed_hasan akka jedhe. Dr Abiyyi Ahmed seenaa Oromoo waan tokko beeka natti infakkaatu seenaa Ethiopias inbeeku Lixa Shaggar !! Hanga Ammaatti mormii malee deeggarsi Hin jiru.Paartiin bilginnaa salphachuun ittuma fufeera. https://t.co/5UqR87veNx pic.twitter.com/1PFGnfBY5O — Kichuu (@kichuu24) December [Read More]
Lixa Shaggar !! Hanga Ammaatti mormii malee deeggarsi Hin jiru.Paartiin bilginnaa salphachuun ittuma fufeera.
Lixa Shaggar !! Hanga Ammaatti mormii malee deeggarsi Hin jiru.Paartiin bilginnaa salphachuun ittuma fufeera. Jidduu kana hojjettoota miseensa Opdo turan waa’ee pp Biliginnaa mariisisaa jiru. Miseensonni Opdo duraanii walga’ii sana irratti harki caalu tuffatee hirmaachuu [Read More]
Oromoo nafxanyaa ta’ee fi nafxanyaa oromoo ta’etu waan Lammaa Magarsaa afarsaa jira.
Oromoo nafxanyaa ta’ee fi nafxanyaa oromoo ta’etu waan Lammaa Magarsaa afarsaa jira. Masgiida kan gubee itti marsee sirbe ummata mootummaa fi paartii mormituu irraa olaantummaa amantaa LTV WORLD: LTV SHOW : ሚኒልክን ማድነቅ በተጎዱት ላይ [Read More]